Ireo farihy lehibe any Amerika Avaratra - Ikkaro
firosoana >> Lohahevitra hafa >> Ireo farihy lehibe any Amerika Avaratra
Ireo farihy lehibe any Amerika Avaratra
ny Nacho morato
Ity lahatsoratra ity dia naoty nalaina ny Farihy Lehibe any Amerika Avaratra, endrika tanindrazana goavambe izay nahaliana ahy. Ny naoty dia nalaina avy tamin'ny lahatsoratra iray avy ary avy amin'ny fanadihadiana National Geographic, avelako ny bibliôgrafia amin'ny farany.
Manantena aho fa mankafy sy mahita mahasoa ny daty rehetra avelako ianao. Ankehitriny rehefa mamaky momba ireo Indiana tera-tany nonina an'ity faritra ity aho dia ho afaka hahatakatra ny habeny.
Noveles sy ny sanganasa izay noresahinay tao amin'ny bilaogy ary napetraka ao amin'ny Comanche Amerikana Avaratra Amerikanina sy Crazy Horse sy Custer
Inona avy ireo farihy?
Ny farihy lehibe any Amerika Avaratra dia 5: Lake Superior, Lake Erie, Lake Huron, Lake Michigan, ary Lake Ontario. Izy ireo dia mitaky 84% amin'ny rano velona any Amerika Avaratra rehetra ary 20% amin'ny rano velona amin'ny planeta iray manontolo. Manome Amerikanina sy Kanadiana efa ho 40 tapitrisa ary manondraka voly maro an'isa.
Ahitana rano velona 22700 miliara litatra.
Misoratra anarana amin'ny lisitry ny mailaka anay
Namaky sy nanaiky ny teny sy ny fepetra aho
Alefaso amin'ity toerana ity foana raha olona ianao:
Ahoana no namoronana azy ireo?
Izy ireo dia niforona raha ny lohasaha lalina dia nosokirin'ny mialoha sy ny fihemoran'ny glacier nandritra ny an'arivony taona maro izay feno rano mangatsiaka tamin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany.
Ranomandry matevina 1,5km. Miasa toy ny plaka ny ranomandry ary ny rano nandalo teo ambaniny dia nanamboatra ny tany ho any amin'ny fantsona.
Ao amin'ny farihy ambony dia misy peratra noforonin'ny rano nanindry ireo antsanga masaka tsara.
Mombamomba ny farihy lehibe
Ny farihy rehetra dia mifandray. Ny rano dia miditra amin'ny farihy ambony avy any avaratra-andrefana, avy eo mankany amin'ny Farihy Michigan sy Huron, izay lobus roa amin'ilay farihy iray ihany. Avy eo Huron ka hatrany Erie, izay midina any amin'ny Niagara Falls ka hatrany Ontario, ary avy eo mankany Atlantika mamakivaky ny renirano St. Lawrence.
Izy io dia iray amin'ireo endrika tanora indrindra eto amin'ny kaontinanta. Nanomboka tamin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany tany Amerika Avaratra izy ireo. Rehefa glaciers kilometatra marihitra matevina avy any atsimon'i Kansas ka hatrany amin'ny Artctic ary rehefa nihena 11000 taona lasa ny valalabemandry, dia nihady lavaka fantsakana feno hetaheta izy ireo ary tonga ny Farihy Lehibe. Ny rafitra contour sy drainage ankehitriny dia tsy nipoitra raha tsy tamin'ny 3000 taona lasa izay.
Ny Superior no lehibe indrindra, ny tranainy indrindra ary kely indrindra maloto, izany hoe, ny tsara indrindra voatahiry. Na izany aza, mihena ny ranomandry ary manafana ny farihy. manana banky vitsy mponina izy io. Mamatsy mponina 581000 ary 9500 XNUMX tapitrisa litatra no lanina isan'andro.
406 metatra ny halaliny
Ny farihin'i Superiror dia vatana misy rano velona misy faritra midadasika indrindra eto ambonin'ny planeta, misy mihoatra ny antsasaky ny totalin'ny rano ao amin'ireo Great Lakes dimy.
Ny farihin'i Michigan dia manana rano mangatsiaka be noho ny tahom-borona manafika izay manala ny fitoplankton. Mamatsy olona 13,3 tapitrisa izay mandany 40900 miliara litatra isan'andro
Io irery ihany no any Etazonia.
Canal Manilou eo amin'ny farihin'i Michigan
Mussels sy ahidrano kladoforika. Ny algoma maty dia mamoaka poizina (miteraka poizina botulism) mahafaty ny trondro sy ny vorona.
Fasana fasana cladaphoras no vokarina.
Ny morontsirak'i Huron dia manana morontsiraka somary mahasalama, saingy manomboka misy ny tahom-borona sy fitrandrahana salmon. Izy io dia mamatsy mponina 3,1 tapitrisa miaraka amin'ny 31600 XNUMX litatra lanina isan'andro
Ferret no zandriny indrindra miteny geolojika.
Ao amin'ny farihy Huron dia misy riandrano ambanin'ny tany lehibe kokoa noho ny Niagara.
10.000 taona lasa izay dia nisy rano mitete sy fiakarana be.
Misy fiantraikany amin'ny haavon'ny farihy ny toetrandro.
Ao amin'ny Farihin'i Huron dia misy tampon-tendrombohitra, tandavan-vatosokay sokay mahazaka ny ranomandry. Nisy izany tamin'ny fotoana niainan'ny Paleo-Amerikanina. Nahita tahiry izy ireo.
7000 hatramin'ny 8000 taona lasa izay dia tany maina. Mino izy ireo fa misy ny endrik'olona hihaza an'i caribou.
Manana olana amin'ny fandotoana ny tanàna ny Farihy Ontario. amin'ny ranon'orana sy rano maloto ary amin'ny famokarana herinaratra miaraka amin'ny zavamaniry izay mampiasa rano farihy ho toy ny coolant. Izy io dia mamatsy mponina 10, w tapitrisa ary 38900 miliara litatra no lanina isan'andro.
244 metatra ny halaliny
Avo dia avo ny haavon'ny rakotra rakotra sy biphenyl polychlorined ka maro amin'ny hazandranoo no tsy azo hanina
5 XNUMX taona lasa izay ny haavon'ny rano dia nisondrotra amin'ny haavon'ny ankehitriny noho ny fiovan'ny toetrandro any amin'ny faritra nitondra orana nameno azy ireo.
Ireo tandavan-tendrombohitra feno vaky any Ontario dia manondro fa iharan'ny tsindry ny faritra Great Lakes. Misy ny fikomiana. Izy ireo dia mariky ny hetsika fanaovana seismika mamorona tandavan-tendrombohitra. vaky famatrarana ireo. Tsy marin-toerana ara-jeolojika toy ny ninoany taloha. Ny habeny dia eo anelanelan'ny 1 sy 3 m ny haavony ary 5 - 10 m ny sakany ary km lagro maro. Feno fikomiana daholo izany.
Misy horohoron-tany kely dia kely.
Amin'ny faran'ny atsinanana, ao amin'ny fantsakan'ny renirano San Lorenzo, dia misy foana. Izy io dia ilay Subdury void, Subdury basin na Subdury. Izy io no vava volkano faharoa lehibe indrindra eto an-tany aorian'ny crater Vredefot. 1,2 km ny savaivony
Ny Lake Erie dia be otrikaina be loatra. Izy io no ambany indrindra amin'ny dimy, manana hakitroka betsaka amin'ny morontsiraka sy ny loto avo. Ny fandroahana any amin'ny fambolena dia miteraka voninkazo algoma mampidi-doza. Izy io dia mamatsy mponina 12,2 tapitrisa izay mandany 26100 miliara litatra isan'andro. Io no 64 metatra ambany indrindra
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2019 dia nisy ahidrano marobe nanarona farihy 1699 kilometatra toradroa. Ireo algôga ireo dia afaka mamoaka poizina ao anaty rano izay miteraka fivontosan'ny hoditra sy fahasimban'ny aty.
Long Point dia manana nosy iray noforonina tamin'ny fasika nanamontsamontsana glaciers.
Karohy ny sarintany Bathymetric Lake Eyre
Ahitana nomerao 2, Long Point ary Dear crick?, Vita amin'ny fasika ny 2.
Niagara Falls, latsaka ny rano 1 tapitrisa litatra afaka 135 minitra.
Hatramin'ny nialan'ny glaciers dia nihanika 11 km miala an'i Upper Ontario mankany amin'ny Lake Eyre ny riandrano.
Hetsika toetr'andro mahery
Mihabetsaka hatrany, ny trangana toetr'andro mahery dia mamely ny faritra Great Lakes noho ny fiovan'ny toetr'andro ary antenaina hitombo hatrany.
Tafio-drivotra mahery vaika toy ny antso izy ireo tafiotra an'arivony taona. Tondra-drano noho ny tondra-drano amin'ny haavon'ny farihy izay manimba ny morontsiraka an-drenivohitra, ny rivotra mahery sns.
Tamin'ny taona 2016 dia nisy tafio-drivotra nandroaka ny herin'ny rafitra famatsian-drano tao Duluth, tanàna iray amoron'ny Farihy Superior, iray amin'ireo rano madio velona lehibe indrindra eto an-tany.
Arovan'izy ireo ny morontsiraka an-tanàn-dehibe miaraka amina vato 69000 taonina hisorohana ny fahasimbana, efa ho lany ny lalana ary tsy manana teti-bola ireo tanàna kely ireo hanohizana ny famerenana azy.
Ny maodely sasany momba ny toetrandro dia maminavina fa ny isan'ireo oram-baratra mahery eto an-tany dia hitombo avo roa heny ho an'ny isam-paritry ny fiakaran'ny mari-pana amin'ny tany.
Ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo amin'ny latitude afovoany sy avo izay mitondra ny ony jet dia nihatsara, ka nahatonga ny fihenan'ny onjan-drivotra izay nisy fiatraikany teo amin'ny toetr'andro, ny tafio-drivotra dia miha-mahazo vahana ary mihamafy hatrany.
Tamin'ny 1972, niaraka tamin'ny fankatoavan'ny lalàna momba ny rano madio, dia nisy fepetra hentitra napetraka momba ny toeram-pitsaboana rano maloto izay nanjary nesorina ny phosfat avy tamin'ny fanafody fanasan-damba. Mitombo haingana ny ahidrano rehefa misy phosforus. Raha tsy misy fosfor dia tsy mihabetsaka izy ireo.
Nandritra ny 25 taona dia nandeha tsara ny zava-drehetra ary aorian'ity indray mitoraka ity dia mbola misy olan'ny ahidrano any amin'ny Farihy Lehibe noho ny fambolena.
Nentanina ny tantsaha hampiasa ny teknikan'ny voa mivantana fa tsy ny tany sy ny zezika amin'ny zezika isan-taona. Saingy ity karazana teknika ity dia mitaky zezika granular hitombo tsara ary ny olana dia eo alohan'ny hamehezana ny zezika eto an-tany ary ankehitriny dia mijanona ao amin'ny 5 cm voalohany amin'ny tany ny granules phosore ary rehefa mameno ny tany ny orana dia mamoaka izany. ary miafara any amin'ny farihy
Ary avy hatrany ny orana ary ezahina hahena ny rano any an-tsaha.
Hatsarao ny tany tokana amin'ny alàlan'ny fambolena voly mandrakotra amin'ny vanim-potoana fialantsiny.
Eto izahay dia mampifandray amin'ilay horonantsary fanadihadiana Kiss of the ground. Manoroka ny tany: Fambolena voajanahary izay azo jerena ao amin'ny Netflix https://www.netflix.com/es/title/81321999
Ny fiantraikan'ny fambolena
Ny olana lehibe indrindra dia vokatry ny fitrandrahana makro ny CAFO (Operations Famahanana biby mifantoka)
Ny basin'i Great Lakes dia manintona rano manodidina ny 1500 lavitrisa litatra isan'andro hanondrahana ny voly. 25% amin'ny famokarana fambolena kanadiana ary 7% ho an'i Etazonia.
Ny velarantany voavoly dia 160,4 tapitrisa hektara any Etazonia ary 37,8 tapitrisa hektara any Canada, izay mazàna dia eo ambanin'ny monokolika mahery. Mamboly katsaka, soja ary ahitra izy ireo isan-taona.
Ny olana amin'ity monokorona ity dia satria lany ny tany dia mila zezika betsaka, arakaraka ny faharetan'ny saha iray hambolena io karazan-java-maniry io ihany no ilaina ny zezika hamenoana ireo otrikaina ao anaty tany.
Amin'ny alàlan'ny fambolena be dia be, azota sy fôsforôra izay tsy tototry ny tany amin'ny alàlan'ny rano maloto dia tonga hatrany amin'ireo tributaries tonga any amin'ireo farihy lehibe. Rehefa tonga eo, ny ahidrano dia mihinana ireo otrikaina ireo ary miteraka amin'ny fomba lehibe, mandray ny tara-masoandro, oxygen ary manempotra ny biby. Ny zavamaniry maty sy ny ahidrano dia lo, ny bakteria dia mangalatra oksizenina bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fanapotehana ny zavatra biolojika.
Ny algoma tafahoatra nateraky ny phosforus dia nanery tanàna lehibe iray tao Ohio hanidy ny famatsian-drano.
Ny honahona mainty lehibe
Honahona 4000 kilaometatra toradroa. Sitrana voajanahary ho an'ny otrikaina be loatra izy io ary tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX dia maina tanteraka izy io mba hahafahan'ny mpivahiny mamboly ny tany mahavokatra.
Ny diatom dia ahidrano hita any amin'ny ranomasina, renirano ary farihy eto an-tany izay mamokatra mihoatra ny antsasaky ny oxygen ao amin'ny atmosfera, mihoatra lavitra noho ny ala tropikaly any Amazon, izay heverina ho avon'izao tontolo izao.
Raha tsy misy diatoms dia sempotra ny farihy ary ampiasaina ho loharano voalohany amin'ny sakafo.
Karazam-diatom 3000 XNUMX eo ho eo no fantatra tao amin'ny Great Lakes ary inoana fa mbola maro ny sisa hita.
Mampiasa hazavana izy ireo hanovana ny rano sy ny gazy karbonika ho lasa gliosida tsotra ary sakafo mafana ho an'ny zooplankton.
Hitan'izy ireo ny fironana mampiahiahy, ny diatoman'ny Great Lakes dia mihakely sy mihakely. Mino izy ireo fa vokatry ny fiovaovan'ny toetr'andro, satria mafana ny rano ao amin'ny farihy, dia manana fotoana sarotra mitsingevana anaty rano tsy dia matevina ny diatom ary milentika izy ireo, saingy rehefa milentika izy ireo dia mihena ny fahafahany mandray hazavana.
Mihamihena ny isan'izy ireo ary kely kokoa ny ao ary soloina karazana "tsy dia tsara kalitao" na algoma misy poizina aza izy ireo
Ny zana-kazo ao amin'ny Farihy Erie dia nampihena 90% ny diatom
Raha tsy misy diatom dia potraka ny tranonkala sakafo. Ny diatoma kely kokoa, dia midika ho zona zooplankton izay tsy midika trondro kokoa.
Raha very ny afobe, dia hiharatsy ny olana.
Sary manome antsika hevitra momba ny haben'ny farihy
Term anishinaabe : zaasigaakwii, ilazana rehefa tonga amin'ny lohataona ny vorona ary entin'ny tafio-drivotra tampoka.
Foano ireo farihy lehibe
Lahatsary fanadihadiana National Geographic ity, izay ilazan'izy ireo amintsika ny farihy lehibe ary zavatra tena mahaliana no anahafany fa manafoana azy ireo amin'ny angona azo avy amin'ny sonar scan.
Avy amin'ireo angon-drakitra ireo sy ireo efa fantatrao, mipetraka ny fanontaniana momba ny fananganana ity rafitra mega voajanahary ity sy ny hoe nanao ahoana ny lasa sy ny hoaviny.
Avelako eto ilay fanadihadiana: (tsy ao amin'ny YouTube intsony izany, azafady indrindra) ary ambanin'ny angona hitako fa mahaliana.
Misy tetezana fampiatoana ny Tetezana Mackinac izay mamakivaky ny Selat Mackinac manana halavirana 8 km eo anelanelan'ny Farihy Huron sy Michigan.
Ao amin'ny Strait of Mackinac dia misy fantsona 40km x 1km ny sakany lalina izay bibilava eo anelanelan'ny sisin-tany.
Mandany ny farihy Maggiore dia hitan'izy ireo fa 5000 hatramin'ny 7000 taona lasa izay dia riaka iray izany. Nisaraka daholo ny kaonty rehetra, zara raha nampifandraisin'ny renirano.
Manodidina ny 6000 ny sambo sambo manodidina ny farihy 5. Ny fitetezana tamin'ny taonjato faha-18,19, faha-20 ary tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX dia nafana tokoa. Io no làlan-tsambo be mpandeha indrindra eto an-tany.
Nilentika i Edmund Fitzgerald, sambo rendrika malaza indrindra tamin'ny 1975. Io no sambo lehibe indrindra nilentika tany Great Lakes. Nilentika tamin'ny 163 m niaraka tamin'ny tafio-drivotra ratsy indrindra tao anatin'ny 3 taona. 29 no maty izay mbola ao anaty ny baro. Vaky roa izany. Mihevitra izy ireo fa nilentika tamin'ny 56 km / ora
Izany dia manome hevitra momba ny ivelan'ny farihy sy ny toetrany
National Geographic Desambra 2020
Wikipedia Lakes lehibe
Lahatsary fanadihadiana ny fandroahana ireo farihy lehibe avy amin'i Nationa Geographic
Mety hahaliana anao izany:
Iacobus nataon'i Matilde Asensi
Miverina ao amin'ny fantsona YouTube aho hamenoana vaovao
Pandemokrasia avy amin'i Daniel Innerarity
Basilisk nataon'i Jon Bilbao
Clepsydras sy famantaranandro silamo nataon'i Antonio Fernández-Puertas
Fivarotamboky an'i Penelope Fizgerald
Famerenana amin'ny laoniny ny boky taloha
Valan'aretina. COVID-19 mampihorohoro an'izao tontolo izao
Sokajy Lohahevitra hafa Ticket navigation
Leave a comment Hanafoana valiny
anarana elektronika namany Sary Web
1 Inona avy ireo farihy?
2 Ahoana no namoronana azy ireo?
3 Mombamomba ny farihy lehibe
4 Farihy ambony
5 Farihy Michigan
6 Farihy Huron
7 Farihy Ontario
8 Farihy erie
9 Hetsika toetr'andro mahery
11 Ny fiantraikan'ny fambolena
12 Ny honahona mainty lehibe
14 Sary manome antsika hevitra momba ny haben'ny farihy
15 Foano ireo farihy lehibe
15.1 vaky sambo